सात कक्षामा पढ्ने किशोरीले ब च्चा ज न्माए पछी, बच्चाको बाबुको बारेमा सोध्दा किशोरीले दिएको जवाफले परिवार नै तिन छक्क परे ! – Ramailo Sandesh
सात कक्षामा पढ्ने किशोरीले ब च्चा ज न्माए पछी, बच्चाको बाबुको बारेमा सोध्दा किशोरीले दिएको जवाफले परिवार नै तिन छक्क परे !
पछिल्लो समय किशोर किशोरीहरुले गर्ने प्रेमलाई समेत समाजले त्यति क ठो र रु पमा लिन छोडेको छ । यसै अवस्थाको फाइदा उठाउँदै एक किशोरले आफ्नै सहपाठीसँग सम्बन्ध बनाएका छन् । उनले त्यस्तो कार्य गरेपछि किशोरीको गर्भ मात्रै बसेन, बच्चा समेत ज न्मियो ।
यो घटना भारतको हो । त्यहाँ पश्चिम बंगालमा सात कक्षामा पढ्ने बालिकाले बच्चा जन्माएकी हुन् । १३ वर्षीया बालिकालाई ब्ल्याकमेल गरेर सहपाठीले सम्बन्ध बनाएको खुलासा भएको छ । घटनापछि आ रो पी सहपाठी आफ्नो परिवारको साथमा बंगादेश भा गे का छन् । आरोपीका हजुरबुवा बंगलादेशमा बस्ने गरेका छन् ।
पीडितकी आमाले स्थानीय प्रहरी चौकीमा छोरीको नाबालिग सहपाठीविरुद्ध उजुरी गरेकी छन् । उनले छोरीको अ न्त र ङ्ग तस्वीरहरू मोबाइलमा राखेर ब्ल्याक मेल गरेको आरोप लगाएकी छन् । प्रहरीले घटनाको विषयमा अनुसन्धान थालेको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै भारतीय टेलिभिजन आजतकको अनलाइन संस्करणले जनाएको छ ।
यस बिषयमा प्रहरीले अनुसन्धान भै रहेको जनाएको छ । अहिले किशोरी र बच्चा संरक्षण केन्द्रमा रहेपनि अब उनीहरुको भविश्य के हुने भन्ने यकिन भै सकेको छैन । मिडिया रिपोर्ट अनुसार बंगलादेश गएका किशोर फर्केर भारत आउने नआउने यकिन छैन ।
घुम्दै जाँदा नातिनिले आफन्तकोमा बस्छिन् भनिएकी हजुरआमालाई बृद्धाश्रममा भेटेपछि…
महिलालाई कस्तो अवस्थामा यौन प्रस्ताव राख्ने ? यो बेलामा नाँई भन्दैनन्
नेपालवाट महिलाका रुपमा दुवई पुगेकी मनकुमारी दुवई विमानस्थलमा पुगेपछि अचानक पुरुष भएपछि…कसरी भयो यो सब?
माघ २३ गतेदेखि विद्यालय खोल्न दिन प्याब्सनको माग